အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 05/21/08
လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး အဖေ…။ သားလုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စက သားဘ၀ တစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတယ် ဆိုတာလဲ အဖေတို့ အနေနဲ့ နဲနဲတော့ ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ဗျာ…။ သားအနေနဲ့ အဖေတို့ အမေတို့ သဘောကို ဘယ်တုန်းကမှ မဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးဆိုတာ အဖေတို့ အသိဆုံးပါ…။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ သားလုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး အဖေ…။ လူတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ထောင်မှုတစ်ခု ပြုတယ်ဆိုတာ…အထူးသဖြင့် သားတို့ လို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် တကယ်ကို လေးနက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာ အဖေတို့လဲ သိရဲ့သားနဲ့ ဗျာ..။ အခုလိုမျိုး ဇွတ်စီစဉ်တာကတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး…။ ဘာလဲ…? သားက အဖေတို့ ပြောသလို အဲဒီ့ မိန်းကလေးက မိဘဆွေမျိုးကလည်း ချမ်းသာပြည့်စုံတယ်..။ ပညာအရည်အချင်းကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ထူးထူး ချွန်ချွန် ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်..။ လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုလည်း ရှိတယ်..။ ရုပ်ရည်လည်း ချောမောလှပတတယ်… ဆိုတာ တွေလောက်နဲ့ သားက လက်ခံလိုက်ရမှာလား…။ သားတို့လည်း ချမ်းချမ်းသာသာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်တဲ့ လူတန်းစား ထဲမှာပါနေတာပဲ…။ မှန်ပါတယ် အဖေတို့ပြောတဲ့ အချက်တွေက သားရှင်မိဘတွေ မပြောနဲ့ ဘယ် လို ယောက်ျားလေးမျိုးကမှ မငြင်းနိုင်တဲ့အပြင် ငန်းငန်းတက် လိုချင်နေမယ်ဆိုတာ သားသိပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အဖေ….။
ဘ၀မှာ ဒီ့ထက်မက အရေးကြီးတာတွေ ရှိသေးတယ်..။ သားကိုယ်တိုင်လည်း အဖေတို့အမေတို့ ကျေးဇူးနဲ့ အခုလို စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ရပြီး ကျောင်းပြီးခဲ့တာပဲ..။ အဖေဆိုရင်လည်း ကိုယ်တိုင်က စီးပွားရေး သမားတစ် ယောက်ပဲ..။ ဒီလိုခေတ် ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အဖေတို့ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေထက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အရေးကြီးနိုင်နေသေးတယ် ဆိုတာရော အဖေတို့ နဲနဲလေးမှ ထည့်မစဉ်းစား ကြတော့ဘူးလား.? သားအနေနဲ့ အခုလိုငြင်းနေ တယ်ဆိုတာကလည်း အခုအဖေတို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ကောင်မ လေးမှာ အပြစ်အနာအစာတွေ ရှိနေလို့ မဟုတ်ဘူး…။ ချစ်တာတွေ မချစ်တာတွေနောက်ထား သူဟာသား အတွက် အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်း သားယုံကြည်တယ်…။ ဒါပေမယ့် ခက်တယ်အဖေ…။ ခက်တယ်…။ သားသူ့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မထပ်နိုင်ဘူး…။ သားဘ၀အတွက် အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်…။ အဓိက အခုသားပြောနေတာတွေက သားအတွက်ထက် နောင် သားတို့တွေ ရရှိလာမယ့် မျိုးဆက်သစ် သားသမီးတွေအတွက် ဆိုရင်ပိုမှန်လိမ့်မယ် အဖေ…။
ဟုတ်ပါတယ်…။ အဖေပြောတာကို သားနားလည်ပါတယ်…။ သားကလည်းအခု အဖေတို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးကို အပြစ်တင် စွပ်စွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ သားအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ လက်မထပ်နိုင်လို့သား ငြင်း နေရတာပါ…။ အဖေပြောတာကို သားလက်ခံတယ်…။ ဟုတ်တယ် သားကောင်မလေးက သာမန် မိသားစု ထဲက…။ ရုပ်ရည်ကလည်း ကြည့်ပျော်ရှုပျော် ရှိရုံလေးလောက်ပဲ…။ ပညာအရည် အချင်းကလည်း ပြည်တွင်း ဘွဲ့တစ်ခုပဲ ရထားတဲ့ သာမန်ကျောင်းဆရာမလေးပါပဲ…။ အဖေတို့ စီစဉ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ယှဉ်ရင် အစစ အရာရာ ဘာမှယှဉ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သားသိပါတယ်…။ ဒီလိုပဲ အဖေတို့ မသိနိုင်သေးတဲ့ အရာတွေလည်း ရှိတယ်…။ ဟုတ်တယ် အဖေတို့မသိဘူး…။ ဘယ်လောက်ပဲ ငွေကြေးချမ်းသာ ချမ်း သာ ဒီလိုခေတ် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ အရာတွေရှိနေတယ်..။ ဘာ..? အချစ်…? အဖေ သားအကြောင်း သိပါတယ်…။ အဖေ့သားက အဲလောက် အချစ်ကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ…။ ဒီလောက်ရှင်းပြ နေတာမှ အဖေတို့ နားမလည်ဖူး ဆိုရင်လဲ…။ အိုကေ…။ ဟုတ်ပြီ အဖေ…။ အဖေသိချင်ရင် သားသူ့ကို ဘာ ကြောင့် လက်မထပ်နိုင်ပဲ သားကောင်မလေးကိုပဲ ဖြစ်အောင် လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သားရှင်းပြပါတော့မယ်…။ သားပြောခဲ့သလိုပေါ့ သားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ သားအတွက် ဆိုတာထက် နောင် သားတို့ ရရှိလာမယ့် မျိုးဆက်သစ် သားသမီးလေးတွေ အတွက် သားဘ၀ကို အနစ်နာခံလိုက်ရတာပါ အဖေ...။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့…နောင်သားအနေနဲ့ သားမသမီးတွေရလာရင် ကျူရှင်စရိတ်တို့၊ Guide စာရိတ်တို့၊ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဂုဏ်ထူးရဖို့ အတွက်ပေးရတဲ့ ဂါရ၀ကြေးတို့ကို သားဘယ်လိုမှ အလျင်မှီအောင် စီးပွားမရှာနိုင်တဲ့အတွက် သက်သာအောင်လို့ပါပဲ အဖေရယ်…။
p.s- ကျွန်တော်ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာမတွေရဲ့ အဆူအဆဲကို ကောင်း ကောင်းကြီး ခံယူပြီး ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ ရုပ်ပြကာတွန်းတစ်ခုအား စကားပြေအဖြစ် ပြန်လည်ရေးသား တင်ပြ ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:50 PM 19 comments: